Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » St. Kitts Hadda Waxay Leedahay Sababta Uu Ugu Dabaal Degayo Safarka
St. Kitts & Nevis maanta waxay u dabbaaldegayaan wicitaankii ugu horreeyay ee Viking Orion, markab aad u qaali ah oo ka yimid Viking Ocean Cruises, qayb ka mid ah Viking Cruises. Si rasmi ah u joogsiga jadwalkooda jiilaalka 2021/2022, Viking Orion wuxuu wici doona 10 jeer St. Kitts Winter 2021/20-22. Kani waa markabkii afraad ee la waco tan iyo markii dib loo bilaabay qaybta dalxiiska iyo wacitaankii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka 2021/2011. Viking Ocean Cruises waa khadka dalxiiska ee ugu weyn waxaana loogu codeeyay #1 Khadka Badweynta ee Condé Nast Traveler's 2021 Abaalmarinta Xulashada Akhristayaasha.
Viking Cruises ayaa yimid St. Kitts markii ugu horeysay xilli ciyaareedkii 2016-17, oo leh Badda Viking. Tan iyo markaas, Viking Sky, Viking Star iyo Viking Sun ayaa booqday St. Kitts. Soo dhaweynta baaqa caleema saarka ee Viking Orion ayaa muhiim u ah masiibada adduunka, iyadoo dalxiiska dalxiisku uu dib u soo dhisayo caalamka. Mudane Lindsay FP Grant, Wasiirka Dalxiiska, Gaadiidka iyo Dekedaha, ayaa yiri, “Farxad weyn bay noo tahay in aan maanta soo dhaweyno Viking Orion. Booqashadani waxay astaan ​​u tahay xidhiidhka sii socda ee ka dhexeeya Viking Cruises iyo St. Kitts, waxay muujinaysaa kalsoonida Viking uu ku qabo St. Kitts halka uu u socdo. Dib-u-bilawga safarka caalamiga ah wuxuu u baahan yahay dhammaan annaga oo ah Federation-ka qaybtooda si aad u da'da weyn iyo kuwa cusub ee dalxiisayaasha safarka ah waxay la kulmi karaan soo jiidashadayada hal-nooc ah, dhaqanka firfircoon, taariikhda qani ah, si fudud Kariibiyaanka dhabta ah.
Inta ay ku jiraan dekedda, rakaabku waxay yeelan doonaan dookhooda gaarka ah, "Safarka La Oggolaaday" dalxiisyo si ay u galaan dareenkooda warwareega, oo ay ku jiraan taariikhiga ah iyo midka nooc ka mid ah Brimstone Hill Fortress iyo National Park, Caribelle Batik, halkaas oo habka dhuka kulul samaynta marada batik weli waa la isticmaalaa ama St. Kitts Scenic Railway, tareenka ugu dambeeya iyo ka kaliya ee rakaabka ee West Indies. Rakaabku sidoo kale way ku raaxaysan karaan oo ku wareegi karaan mid ka mid ah xeebaheena quruxda badan, South Friars ama Carambola Beach Club, waxay booqan karaan guri beereedka Faransiiska oo si buuxda loo soo celiyay ee Fairview Great House ama waxay ku raaxaysan karaan jardiinooyinka kulaylaha ee Palms Court Gardens. Soo-booqdayaashu waxay sidoo kale si xor ah ugu wareegi karaan Port Zante waxayna ku raaxaysan karaan farshaxanka maxalliga ah iyo farshaxanimada ee Suuqa Farshaxanka ee Amina iyo iibiyeyaasha Rock Rocks ama waxay booqan karaan dukaamada tafaariiqda, dukaamada xusuusta, baararka iyo makhaayadaha bixiya cuntooyinka maxaliga ah, Kariibiyaanka iyo kuwa caalamiga ah.
"Waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino Viking Cruises iskaashigooda qiimaha leh iyo ka mid noqoshada St. Kitts & Nevis ee safarka xilli-ciyaareedka Viking Orion," ayuu yiri Racquel Brown, maamulaha Maamulka Dalxiiska ee St. Kitts. In kasta oo St. Kitts ay inta badan ahayd goob lagu soo dhoofiyo maraakiibta caleema saarka, booqashadan ayaa si gaar ah muhiim u ah xilli khadadka dalxiiska iyo meelaha loo aadi karo ay ka wada shaqeynayaan dib u dhiska waaxda ka dib masiibada adduunka. Waxaan rajeyneynaa inaan dib u helno Viking Cruises waxaana rajeyneynaa iskaashigayada socda sanadaha badan ee soo socda.
Viking Orion ayaa ka shiraacday Ft. Lauderdale, Port Everglades safar safar 14-maalmood ah kaas oo St. Kitts uu yahay maalinta saddexaad (3aad).